MacOS High Sierra enweghị njikọ na Apple ID | Esi m mac
MacOS High Sierra enweghị njikọ na Apple ID gị
Kemgbe ehihie Mọnde gara aga, ndị ọrụ niile nwere kọmputa Mac dakọtara nwere ike kporie sistemụ arụmọrụ desktọọpụ macOS High Sierra ọhụrụ, ma ọ bụ site na mfe, ọ bụ ezie na ọ bụghị mmelite ngwa ngwa, ma ọ bụ site n'ịrụ a echichi si ọkọ nke ahụ na-enye ha ohere iji rụọ ọrụ nke ọma ma nwekwuo ike.
MacOS High Sierra eruola ozi jupụtara na ya, ọtụtụ n'ime ha anaghị ahụ anya na nke mbụ, dị ka ọ dị na mmelite, nke Ha enweghịzi njikọ na Apple ID gị apụtaghị na ngalaba "Zụrụ" site na Mac App Store. Ma gịnị kpọmkwem ka ihe ndị a pụtara?
MacOS High Sierra ga-apụ n'anya nzụta gị
Site na ntọhapụ nke macOS High Sierra, a chọpụtala na ụlọ ọrụ ahụ Apple anaghịzi edepụta mmelite nke sistemụ arụmọrụ gara aga, macOS Sierra, ma ọ bụ mmelite dị ugbu a na macOS High Sierra, na taabụ "Zụrụ" nke Mac App Store.
N'ezie, ọ bụrụ na ị lelee ngalaba a, ị ga-enwe ike ịhụ etu macOS Sierra ma ọ bụ macOS High Sierra siri pụta na ndepụta ịzụ ahịa, nke na-egosi emelitere mmelite na Apple ID kpebisiri ike.
Ruo ugbu a, mmelite niile gara aga na sistemụ arụmọrụ Mac jikọtara ya na Apple ID, nke onye mere ya, na mmelite ahụ chọrọ Apple ID na iwebata paswọọdụ, ihe nwere ike ịbụ nsogbu mgbe Mac gbanwere inwe, ma o buru na enyeghi ya site na iwepu efu.
Otú ọ dị, a Apple nkwado akwụkwọ Banyere reinstalling ngwa na-egosi na mgbanwe ahụ iji wepu macOS Sierra na High Sierra site na ịzụta ihe ọ kpachaara anya mee: "MacOS Sierra ma ọ bụ mgbe e mesịrị apụtaghị na taabụ Zụrụ", ha rụtụrụ aka na MacRumors.
N'ihe banyere macOS Sierra, mgbanwe a pụtara Enweghị ụzọ ọrụ maka ndị ọrụ iji budata ma wụnye macOS Sierra ma ọ bụrụ na ha chọrọ ibudata na High Sierra. Ọ bụ ezie enwere ụzọ mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » MacOS Sierra ukwu » MacOS High Sierra enweghị njikọ na Apple ID gị
Enwere ike ịnweta AirPods ruo ụbọchị 3-5
Soro ndi ezinulo gi kerita iCloud gi na macOS High Sierra